Izindaba - Ukuxhumana nokukhuthazwa kokuphuma kwekhebula — Isiteshi saseNanjing wasin fujikura
Ngokujula okuqhubekayo kokuqaliswa okuthambile komugqa wokukhiqiza ikhebula, umqondo omncane nombono wethulwa kancane kancane kwezinye izinkampani ezingaphansi. Ukuze kuqiniswe ukushintshana nokusebenzelana kokufunda okuncane phakathi kwezinkampani, umugqa wokuphuma uhlela ukuthatha ukusungulwa kwemisebenzi ye-QCC kanye nezinkomba ze-OEE njengendawo yokungena yemisebenzi ye-Lean yezinkampani ezingaphansi, futhi uhlela futhi uhlele imisebenzi yokuxhumana ehambisanayo endaweni.
Ekuseni ngo-Agasti 5, umhlangano wokuxhumana nokukhuthaza ukukhiqizwa kwamakhebula wabanjelwa egunjini lenkomfa laseNanjing wasin fujikura. U-Huang Fei, umphathi jikelele wokukhiqiza amakhebula kanye nesikhungo sokukhiqiza ulayini ophumayo, u-Zhang Chenglong, iphini lomphathi jikelele we-wasin fujikura, i-Yang Yang, isekela lemenenja jikelele, uLin Jing, umphathi jikelele wozakwethu ababonisana ne-Aiborui Shanghai inkampani, kanye nozakwabo abakhulu besikhungo sokukhiqiza kanye wasin fujikura waya emhlanganweni.
Emhlanganweni, u-Lin Jing ushintshisane futhi wabelana ngokulawulwa kochungechunge lwenani eliphelele ngaphansi kokucabanga kwebhizinisi mayelana nesimo samanje somnotho, izinjongo kanye nengqikithi yokusebenza kwebhizinisi kanye nomqondo wokuphatha okuthambile. Ngesikhathi esifanayo, wethula futhi washintshanisa okuqukethwe kokuqaliswa, imibono yokuhlela ukuqaliswa kanye nempumelelo yephrojekthi yokukhiqiza eqinile yomugqa wokukhiqiza.
Khona-ke, umphathi jikelele u-Huang Fei wesikhungo sokukhiqiza waqeqesha wonke umuntu ngolwazi oluyisisekelo lwe-OEE. Kulolu hlelo, wabelane ngolwazi ngokuhambisana nemithombo yedatha ye-OEE, izinjongo kanye nedatha yomlando yesikhungo sokukhiqiza. Isikhungo sokukhiqiza sichaze ukusekelwa kwamabhizinisi ahlukahlukene ukuze kuthuthukiswe i-OEE ngokuphathwa kwenqubomgomo kanye nezinjongo, sisungule ngokuphelele izihloko eziyinhloko zokuthuthukiswa, futhi sakhe ngokuningilizayo nangokuhlelekile uhlelo lokuphatha ngcono lwe-OEE.
Ngemva kokuqonda isimo samanje sokusetshenziswa okunciphile esikhungweni sokukhiqiza, izinhlangothi zombili zixoxisane ngokuqondwa kwe-lean kanye nobunzima okuhlangatshezwane nabo ekuphromothweni. Lezi zinhlangothi zombili zibe nokuhwebelana okujulile ekwethulweni komqondo onciphile kanye nendlela yokusebenzisa izindlela ezinciphile namathuluzi ukuthuthukisa isizinda se-supply chain.
U-Lin Jing ugcizelele ukuthi ukuqaliswa kwe-lean kuyehluka ngokwamasiko ezinkampani ahlukene. Asikho isinqamuleli sokusetshenziswa okuncikile. Amabhizinisi adinga ukuhlanganisa ulwazi lwawo futhi asebenzise izindlela zobuchwepheshe kanye namathuluzi ukuze akhe isistimu yawo yokusebenza ethambile kuyindlela yesikhathi eside.
U-Yang Yang ubonise ukuthi ukuncika kuzohlanganiswa emsebenzini kanye nezindinganiso, futhi ekugcineni kubuyele emsebenzini wansuku zonke, kungakhathaliseki ukuthi ukuthuthukiswa kwesiphakamiso, imisebenzi ye-QCC noma ukuqaliswa kwe-OEE. Kule nqubo, into ebaluleke kakhulu ukuqonda kwawo wonke umuntu nokuqaphela umqondo. Inqubo yokuqaliswa ihlala njalo. Ngokubambelela kukho kuphela lapho singathola khona imiphumela yokuncika.
Ekugcineni, u-Huang Fei waphetha ngokuthi ukwanda komfutho kanye nemvamisa yokubamba iqhaza kwabaholi emisebenzini yabasebenzi abaphambili ngokungangabazeki kunethonya elikhuthazayo ekuziphatheni okuhle kwabasebenzi. Ngenkathi yethula umugqa ongaphambili, inkampani futhi idinga ukwakha inkundla yobungcweti, iqale kusukela esimeni sonke, icubungule ngokuhlelekile ukwethulwa kwemibono namathuluzi nezindlela ezi-Lean, futhi ilungise izinyathelo ezimweni zendawo. Ulayini wokuphuma kwekhebula nawo uzosiza izinkampani ezingaphansi kwazo ukukhuthaza ukuqaliswa komsebenzi ongenawo amandla ngokuhambisana nezinkinga ezingokoqobo. Wayekholelwa ukuthi ukuqaliswa kwe-lean kuzothela izithelo ngemizamo yawo wonke umuntu.
Yehlisa Intengo Yekhebula Le-Fiber Optic, I-Cladding Diameter, Ikhebula elingaphansi komhlaba, Yehlisa Intengo Yekhebula, 8 I-Core Single Mode Fiber Optic Cable Price, I-Optical Fiber G657,